Faritany eto Madagasikara. I Madagasikara dia manana faritan
Distrika eto Madagasikara
Distrikan i Tsiroanomandidy
Distrikan i Fenoarivobe
Fiangonana Fifohazam-Panahy Loterana Malagasy
ⓘ Faritany eto Madagasikara. I Madagasikara dia manana faritany enina: Faritanini Mahajanga, FaritaninAntsiranana, FaritaninAntananarivo, Faritanini Toamasina, Fa ..
Ny Faritanin i Mahajanga dia faritany eto Madagasikara. Ireto avy ny tanàna lehibebe ao amin ny Faritanin i Mahajanga: Tsaratanana Besalampy Bealanana Mandritsara Mitsinjo Soalala Antsalova Maintirano Kandreho Antsohihy Analalava Mampikony Morafenobe Befandriana-Avaratra Mahajanga Urban Ambatomainty Maevatanana Marovoay Mahajanga Rural Boriziny Ambatoboeny Ireto ny faritra ao amin ny Faritanin i Mahajanga: Faritra Boeny Faritra Sofia Faritra Betsiboka Faritra Melaky
Ny Faritanin i Toamasina dia iray amin ireo faritany enina eto Madagasikara, izay manana velarana 71 911 km 2. Misy mponina miisa 3 438 275 io faritany io tamin ny taona 2011. Ny tanànan i Toamasina no renivohiny. Misy faritra miisa telo ny ao amin ny Faritanin i Toamasina, dia ireto avy: Faritra Alaotra-Mangoro Faritra Atsinanana Faritra Analanjirofo Misy distrika mliisa valo ambin ny folo ny ao amin ny Faritanin i Toamasina, dia ireto avy:
Ny distrka dia fizaràn ireo faritra 22 eto Madagasikara izay mitsinjara indray ho kaominina. Tsy vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ny distrika fa fizaràna mahakasika ny fanapariaham-pahefana avy amin ny fitondrana foibe. Miovaova ny isan ny distrika eto Madagasikara arakaraka ny fitondram-panjakana. Ao amin ny didim-panjakana lafarana 2005-012 nivoaka tamin ny 11 Janoary 2005 dia miisa 119 ireo distrika ireo. Taty aoriana dia niova izany. Ireto ireo distrika 114 ireo: Marihina fa talohan ny taona 2007 dia tao amin ny Distrikan i Fianarantsoa II ny Distrikan Isandra sy ny Distrikan i Lala ...
Ny evanjelisma eto Madagasikara dia nanomboka niditra teto amin ny Nosy taorian ny nahazoan i Madagasikara ny fahaleovan-tena, indrindra fa teo amin ireo taona 1990. Ny evanjelisma na fiangonana ara-pilazantsara dia fihetsiketsehana kristiana milaza fa ny Filazantsara no hany fototra sy filamatry ny finoany. Tsy mitsaha-mitombo isa ireo fiangonana ireo eto Madagasikara. Maro amin izy ireo no matetika lazaina amin ny anarana hoe "fiangonana zandriny". Isan ny fiangonana evanjelika ny Fiangonana Batista Biblika eto Madagasikara, ny Jesosy Mamonjy, ny Assemblée de Dieu, ny Fiangonana Pentekot ...
Ny Faritanin i Fianarantsoa dia faritany iray aminny enina eto Madagasikara. Tamin ny taona 2011 izy dia nanana velarana 103 272 km 2 sy mponina 4 142 444. Ny hakitroky ny mponina dia 40 mp/ km 2. Ny tanànan i Fianarantsoa no renivohiny. Misy faritra dimy ny ao amin ny Faritanin i Fianarantsoa, dia ireto avy: Faritra Matsiatra Ambony Faritra Atsimo-Atsinanana Faritra Ihorombe Faritra Amoroni Mania Faritra Vatovavy-Fitovinany Misy distrika miisa dimy amby roapolo ny ao amin ny Faritanin i Fianarantsoa.
Ny Faritanin Antsiranana dia iray amin ireo faritany enina eto Madagasikara izay manana velarana mirefy 43 406 km 2. Misy mponina 1 465 606 izy tamin ny taona 2011. Eo amin ny 34 mp /km 2 I ny hakitroky ny mponina. I Antsiranana na Diego-Suarez ny renivohiny. Misy faritra roa ny ao amin ny Faritanin Antsiranana, dia ny Faritra Diana sy ny Faritra Sava. Misy distrika sivy ny ao amin io faritany io izay mitsinjara amin ireo faritra roa ireo toy izao: ao amin ny faritra Diana no misy ny distrikanAmbanja, Ambilobe, Antsiranana I, Antsiranana II, ary Nosy Be; ao amin ny faritra Sava no ahitana ...
ⓘ Faritany eto Madagasikara
I Madagasikara dia manana faritany enina:
Ankehitriny dia nozaraina ho faritra 22 ireo faritany ireo:
Wikipedia: Faritany eto Madagasikara
Fiangonana Fifohazam-Panahy Loterana ..